မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးခေါငျးဆောငျ မကျဂှိုငျးယားက ပဲလစျေ့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ အသငျးဖျော ရပျရျှဖို့ဒျနဲ့ စကားမြားခဲ့တာဟာ အသငျးနိုငျပှဲရဖို့ နှဈယောကျစလုံး ဆန်ဒပွငျးပွနတောကွောငျ့ဖွဈပွီး အဲဒီအတှကျ သူတို့နှဈယောကျကွားမှာ ဘာပွဿနာမှမရှိဘူးလို့ ဖှငျ့ဟပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ကွားရကျတုနျးက ပဲလစျေ့နဲ့ ဂိုးမရှိသရကေခြဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂျပှဲ ဒုတိယပိုငျးမှာ ယူနိုကျတကျအသငျး ဂိုးရဖို့ရုနျးကနျနရေခြိနျ မကျဂှိုငျးယားက လူကြှံဘောမဖွဈစအေောငျ ကစားဖို့ (‘f****** get back onside’)လို့ အျောဟဈညှနျကွားခဲ့ခြိနျမှာ ရပျရျှဖို့ဒျက “မငျးက ငါ့ကို ဘယျလိုကစားစခေငျြနတောလဲ”( ‘What the f*** do you want me to do? You f****** k*******.’)ဆိုပွီး ပွနျလညျတုံ့ပွနျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီဖွဈရပျကွောငျ့ ယူနိုကျတကျကစားသမားတှကွေားမှာ စညျးလုံးမှုပွိုကှဲနပွေီဆိုတဲ့ သတငျးတှထှေကျပျေါနပွေီး မကျဂှိုငျးယားကတော့ သူနဲ့ ရပျရျှဖို့ဒျကွားမှာ ဘာပွဿနာမှမရှိဘူးလို့ ပွောကွားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မကျဂှိုငျးယားက “ခနျြပီယံဆုဖလားတှေ ရယူခငျြတယျဆိုရငျ အသငျးကို ဦးဆောငျနိုငျတဲ့ကစားသမားတှရှေိဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ကှငျးထဲမှာ ပရိသတျတှမေရှိတာကွောငျ့လညျး ကြှနျတျောတို့ စကားမြားခဲ့တာက အရမျးသိသာသှားခဲ့တာပါ။
ဒါပမေဲ့ တခွားပှဲတှမှောလညျး ကြှနျတျောတို့ ဒီလိုပဲ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အျောဟဈနကွေတာဖွဈပါတယျ။ ရပျရျှဖို့ဒျကို ကြှနျတျော လေးစားမှုအပွညျ့ရှိသလို သူကလညျး ကြှနျတေျာ့အပျေါ အဲဒီလိုပဲသဘောထားတာဖွဈပါတယျ။ သူက အသငျးအတှကျ အကောငျးဆုံးကစားပေးခငျြသလို ကြှနျတျောကလညျး အသငျးရလဒျကောငျးတာကိုပဲ လိုခငျြတာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလိုဖွဈမလာရငျ ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျစလုံး စိတျပကျြဒေါသထှကျတာ ထုံးစံပါပဲ။
ကြှနျတျောတို့တှကေ ပှဲတိုငျးအနိုငျရဖို့ ဆန်ဒပွငျးပွနကွေသူတှဖွေဈပါတယျ”လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ အခုနောကျပိုငျးပှဲတှမှော တိုကျစဈကဂိုးရဖို့ ရုနျးကနျနရေပွီး ပရီးမီးယားလိဂျအဝေးကှငျး (၃)ပှဲဆကျသရကေခြဲ့သလို အဲဒီ(၃)ပှဲမှာ တဈဂိုးသာသှငျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးအနနေဲ့ ဒီနေ့ မွနျမာစံတျောခြိနျ ည(၁၁:၀၀)နာရီအခြိနျမှာ မွို့ခံပွိုငျဘကျ မနျစီးတီးအသငျးနဲ့ အဝေးကှငျးပှဲစဉျယှဉျပွိုငျကစားရမှာဖွဈပွီး ဒီပှဲပွီးရငျ လာမယျ့(၂)ပတျအတှငျး အစေီမီလနျနဲ့ ယူရိုပါလိဂျရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ ပှဲစဉျနှဈပှဲ၊ ဝကျဈဟမျးနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျအိမျကှငျး၊ FA ဖလားကှာတားဖိုငျနယျအဖွဈ လကျစတာနဲ့ ပှဲကပျြတှေ ဆကျတိုကျကစားရမှာလညျးဖွဈပါတယျ။
ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်နဲ့ မိမိကြားမှာ ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးလို့ မက်ဂွိုင်းယား ဖွင့်ဟ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဂွိုင်းယားက ပဲလေ့စ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ အသင်းဖော် ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်နဲ့ စကားများခဲ့တာဟာ အသင်းနိုင်ပွဲရဖို့ နှစ်ယောက်စလုံး ဆန္ဒပြင်းပြနေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီး အဲဒီအတွက် သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးလို့ ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ကြားရက်တုန်းက ပဲလေ့စ်နဲ့ ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲ ဒုတိယပိုင်းမှာ ယူနိုက်တက်အသင်း ဂိုးရဖို့ရုန်းကန်နေရချိန် မက်ဂွိုင်းယားက လူကျွံဘောမဖြစ်စေအောင် ကစားဖို့ (‘f****** get back onside’)လို့ အော်ဟစ်ညွှန်ကြားခဲ့ချိန်မှာ ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်က “မင်းက ငါ့ကို ဘယ်လိုကစားစေချင်နေတာလဲ”( ‘What the f*** do you want me to do? You f****** k*******.’)ဆိုပြီး ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် ယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေကြားမှာ စည်းလုံးမှုပြိုကွဲနေပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီး မက်ဂွိုင်းယားကတော့ သူနဲ့ ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်ကြားမှာ ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးလို့ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဂွိုင်းယားက “ချန်ပီယံဆုဖလားတွေ ရယူချင်တယ်ဆိုရင် အသင်းကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ကစားသမားတွေရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကွင်းထဲမှာ ပရိသတ်တွေမရှိတာကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့ စကားများခဲ့တာက အရမ်းသိသာသွားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ တခြားပွဲတွေမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အော်ဟစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်ကို ကျွန်တော် လေးစားမှုအပြည့်ရှိသလို သူကလည်း ကျွန်တော့်အပေါ် အဲဒီလိုပဲသဘောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူက အသင်းအတွက် အကောင်းဆုံးကစားပေးချင်သလို ကျွန်တော်ကလည်း အသင်းရလဒ်ကောင်းတာကိုပဲ လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်မလာရင် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံး စိတ်ပျက်ဒေါသထွက်တာ ထုံးစံပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေက ပွဲတိုင်းအနိုင်ရဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ တိုက်စစ်ကဂိုးရဖို့ ရုန်းကန်နေရပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်အဝေးကွင်း (၃)ပွဲဆက်သရေကျခဲ့သလို အဲဒီ(၃)ပွဲမှာ တစ်ဂိုးသာသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ဒီနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ည(၁၁:၀၀)နာရီအချိန်မှာ မြို့ခံပြိုင်ဘက် မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ အဝေးကွင်းပွဲစဉ်ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပြီး ဒီပွဲပြီးရင် လာမယ့်(၂)ပတ်အတွင်း အေစီမီလန်နဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့် ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲ၊ ဝက်စ်ဟမ်းနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်အိမ်ကွင်း၊ FA ဖလားကွာတားဖိုင်နယ်အဖြစ် လက်စတာနဲ့ ပွဲကျပ်တွေ ဆက်တိုက်ကစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။